Inguqulo 0.6.5 – Manje izici izimbungulu kancane
Okthoba 26, 2010 by okunikezwayo 8 Amazwana
Izimbungulu - Gotta sibathande
Inguqulo 0.6.5 uye egxile squashing ezinye izimbungulu (kanye regressions ambalwa too). It iyona isofthiwe ezinzile kakhulu futhi best esiye olukhishwe namuhla. Ibuye unezela usekela amanye magic unhlokweni for izinjini.
Lets nje ubuyekeze log ushintsho lapha:
Fixed isiSlovenia flag bug owabikwa anphicle (Kwakungu Sierra Leon ngaphambi kwalokho, Sibonga i-neso elibukhali!).
Fixed udaba ngendlela wordpress babhekana Ukuphinde uqondise eBhayibheli futhi url rewritings njengoba kubika Marco, wordpress wayengazi indlela thina elihunyushwe tag nesigaba prefixed URL futhi ngenxa yalokho kabusha ukuba le url elizenzakalelayo kolimi. Lo fix bathuthukisa uhlobo eBhayibheli yezinye URLs.
Fixed a bug nazo ukuhumusha yonke futhi emva leposi translation okuyinto ingathiyeki ikhono abo ukusebenza – (ngiyabonga nightsurfer [ithikithi #122]) – nathi wazinika isikhathi ngcono ekuphatheni bokudlulisa ulwazi bahumushe konke ukusebenzisa meta esikhundleni yokuqondisa kabusha.
Esinqunyiwe ye-JSON translation for buddypress umchachazo daba – (ngiyabonga Inocima [ithikithi #121]).
Manje usebenza kuma-wokuhlanza ku trac ohlelweni lwethu, imisebenzi amathikithi evulekile ukuze mlando ezintsha. Sicela uzame ukwenza lolu mzamo elibi kangaka ngokudala amathikithi ezintsha njengakudala fast ngangokunokwenzeka.
Futhi njengoba njalo – ukujabulela lokhu version.
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: buddypress, bugfix, flag Name Is Skrillex, minor, ukukhululwa, LELI
Inguqulo 0.5.3 – Ikhono ukuhumusha URL
June 1, 2010 by okunikezwayo 44 Amazwana
Le nguqulo entsha kuvumela URLs esakhiweni ukuba lihunyushwe kuya ngezilimi target inikezwe. Sithanda ukubonga Hans kusuka Cosmedia (a website mayelana ukuhlinzwa yezimonyo in kanye imithi) ngokuba ekuxhaseni umsebenzi kwenziwa lesi sici, kanye ekuxhaseni isichibi ukusekela permalinks kuwumkhuba plugin. Uma kushoda sici, ukudala ithikithi kithina endaweni okuthuthukiswa sizobese uyifaka ukuba yethu ohlwini todo. Uma ufuna ukusisiza, ukuxhasa ukuthuthukiswa a feature kuyosisiza uyoqinisekisa ukuthi kuyenzeka ngokushesha, kanye nomphakathi ukuze athole umkhiqizo oluphelele.
Kukhona futhi intuthuko eminye kwakuhlanganisa ezifana lokuthi imibono ezenziwe ngaso izilimi ezihlukene kunabantwana iphutha elilodwa ibhalwe njengoba enjalo futhi babe lihumushekela at ngolimi oluzenzakalelayo (kudingeka uphawu ukuhumusha iphutha lolimi khetho in the izilungiselelo), Ukwesekwa olungcono wordpress super isilondolozi plugin, kanye ngcono encane jQueryUI version esetshenziswa esisiza ne wordpress 3.0 support ezayo.
Intwana Last ngaleli ajenda isaziso wukuthi sifuna wena ukwazi ukuthi sinawo ikhasi kwi development lethu indawo lapho sihlale omunye umuntu plugin uhlu ukuhambisana (kukhona namabala uma kudingwa). On thwebula yethu Ukwesekwa plugin page matrix, njengoba layo a thwebula, Imane umsebenzisi esakhiweni nalapho bazizwe bekhululekile hlela bese sithuthukise lokhu.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: Iminikelo, minor, ukukhululwa, LELI, Trac, wordpress 3.0, WP-super-isilondolozi
Translation kungaba ukushayela umthamo kusayithi lakho
September 19, 2009 by okunikezwayo 4 Amazwana
Sithole ulwazi (futhi isithombe nice) kusukela Mike uJan kusuka iPhone bashing indawo.
Bash.ch traffic Eqa emva Transposh filter ufake
Transposh ihlose ukwenza site lakho okuningi kufinyeleleke kakhudlwana kwabanye, ngokwemvelo kuhlanganisa izinjini. Lokhu kuvumela abasebenzisi more ukuya kusayithi lakho bese uthole okuqukethwe kwakho (ngisho noma ekuqaleni lalotshwa ngolimi angimuzwa). Le sayithi uyisibonelo esiphelele, ekuqaleni labhalwa German, lapho kokuqukethwe yayo enkulu phathelana elihunyushwe (futhi therefor kuyatholakala okuningi) its reach skyrocketed 😉
Samukela abanye ukuba bahlanganyele izindaba zabo siqu imibono kule post, uke wazibonela impumelelo efanayo? Lutho? Yini uzizwa namanje ulahlekile? Sesikhathele njalo happy ukuzwa.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: LELI